.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Web Design HTML and CSS
အင်တာနက်ပေါ်က Web Page တွေကို ဘယ်လို ဖန်တီး တည်ဆောက်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားပြီး
အခြေခံအကျဆုံး HTML , CSS Programming အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Web Site ရှိသူတွေ ၊ Web Design တွေ ဖန်တီးတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
ဒီစာအုပ်လေးက အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ သေချာလေ့လာကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Download: Web Design HTML and CSS
Posted by Thurainlin at 08:57
Labels: Blog, Coding, Ebook, Website, နည်းပညာ